Ukufudumala kunye nothando e-B20! Siza kukunceda - I-Airbnb
Ukufudumala kunye nothando e-B20! Siza kukunceda
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguSuneeta
Ukuhonjiswa kwekhaya yinto yanamhlanje. Enye ifenitshala yesintu yabazali bam abasemzini iyenza ingabi naxesha. Indawo yam ifudumele kwaye itofotofo. Ndinobuhlobo njengokuba ufuna ukuba ndenze😊.. Umbindi weSixeko yindawo ekhuselekileyo yeDurgapur. Iivenkile ezininzi,iiofisi zithi ndijonge kuneepaki nezinto eziluhlaza. Nangona iipaki zingaphantsi kweemayile ezimbalwa. Ikhaya lethu kulapho kukho iikati nezinja ezininzi zasekuhlaleni eziza kutya zize ziphumle😀😀. Kodwa azivumelekanga ngaphakathi. Sisebenza kude kube ngo-6 ebusuku emini
Sinabasebenzi ngoko kusenokungafuneki uhlambe iimpahla okanye i-crockery. Ndiza kukuvuyela ukuhlangabezana neemfuno zakho ezikhethekileyo ukuba uyasazisa kwangaphambili ngeimeyile 😊
4 iibhedi ezilala abantu ababini, ibhedi elala umntu omnye eyi-1
Sineendawo zokutya nezokuhlala e-. Ukuthenga kunye neemuvi. Ngoko ubumnandi abufanele bube yingxaki kwaphela😊. Abamelwane bethu ngabantu babucala. Sithanda ukuvala ngo-10pm. Iti yasekuseni/ikofu iza kufumaneka ukususela ngo-6.30/7am. Emva koko 😊 ndishiya isidlo sakusasa ngomsebenzi ngo-9 kusasa.
Ndingathanda ukufaka isicelo sondwendwe lwam apha: nceda usichazele izinto ezimbalwa ngawe nenjongo yokutyelela kwakho xa unxibelelana nam. Eyethu likhaya lethu, nokwazi kancinci ngawe kundinceda ndilungiselele ndize ndisamkele ngokukhawuleza isicelo sakho sokubhukisha. Ngokuqhelekileyo andivumi ukubhukisha ndingakhange ndiqonde ukuba ndiza kuhlala nabani kwiintsuku ezimbalwa ezizayo.. Ndiyathemba ukuba uyaqonda.
😀Sikhangele phambili ekukwamkeleni ngokufudumeleyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Suneeta
Mna nomyeni wam sisebenza ngaphandle kwendlu. Kunqabile ukuba sibe sekhaya phakathi ko-9 kusasa no-7 emva kwemini. Phakathi kwala maxesha kuza kufuneka ushushule ukutya kwakho/ uzenzele iziselo zakho😊.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Durgapur